Saraakiisha Shabaabka sida aadka loo baadigoobayay oo la dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Hay’adda NISA ayaa sii xoojisay howlgallada ay ka waddo magaalada Muqdisho, kadib qaraxii bahalnimada ahaa ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo galaaftay nolosha 8 qof oo ay ku jireen caruur iskuuley ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka ee NISA, ayaa sheegtay in 12 kamid ah Saraakiisha Al-Shabaabka ee sida aadka ah loo baadigoobayay lagu dilay hawlgal gaar ah oo xalay ka dhacay Muqdisho.
“Howlgal gaar ah oo xalay dhacay ayaa lagu beegsaday 15 Sarkaal oo katirsan Al-Shabaab, kuwaasoo kooxda u qaabilsanaa qalqal gelinta amniga Muqdisho. Waxaa la dilay 12 argagixiso. Waa waajib qaran in la ilaaliyo amniga iyo badbaadada shacabka Soomaaliyeed,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay NISA.
Hay’adda NISA ayaa intaa ku dartay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday 15 ka Sarkaal, ee sida aadka ah loo baadi goobayay uu ka dhacay waqooyiga Caasimadda. Si kastaba ha ahaatee, laamaha amniga si dhab ah uma sheegin halka uu hawlgalka ka dhacay.
Mudooyinkii dambe NISA ayaa sii xoojisay howlgallada ay ka waddo Muqdisho, kadib qaraxii bahalnimada ahaa ee todobaadkii hore ka dhacay wadada C/qaasim, kaasoo galaaftay nolosha 8 qof oo ay ku jireen caruur iskuuley ah.
Axadii, ayay aheyd markii Ciidamada NISA ay soo bandhigeen hub badan oo ku jiray god lagu keydiyo waxyaabaha qarxa oo ku yaala Suuq-xoolaha, degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho.